What is PBL?? - IT-KOKO
By အိုင်တီကိုကို on Wednesday, October 19, 2011
PBL(Problem Based Learning) ကို တော်တော်များများ သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ပြဿနာတစ်ခုခုကို ဖြေရှင်းပြီး သင်ကြားရတဲ့ စာသင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတော်တော်များများမှာ PBL ကိုသုံးနေကြပါပြီ။ အဓိက Objective ကတော့ ကျောင်းသားတွေကို problem-solving process skills တိုးတတ်လာစေဖို့ပါ။ Team-work, group discussion, presentation, communication and problem-solving စတဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ အဓိက ကျတဲ့ skills တွေကို လုပ်ရင်းနဲ့သင်(learning by doing) ရတာပါ။ ကျောင်းပြီ:သွားလို့ အလုပ်စလုပ်ရတဲ့ အခါမှာ တော်တော်များများအခက်တွေ့ကြတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ကျောင်းမှာ သင်ကြားရင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ပေးထားတာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းသလို့ အလုပ်ခွင်မှာ ကျောင်းသားတွေ တော်တော်များများ OK တယ်။ အူကြောင်ကြောင် မဖြစ်တော့ပဲ။ ပြဿနာတွေကို ချက်ချင်း ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ ဒါတင်မက ပေးထားတဲ့ task တွေကိုလည်း အချိန်မှီပြီးအောင်လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်နေကြတယ်။
Self Study ကို ဉီးစားပေးထားပြီး ကျောင်းသားတွေကို ကိုယ့်ဟာကို သင်ယူတတ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ system တစ်ခုလို့ပြောရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြဿနာတစ်ခုကို ပေးပြီးတစ်နေ့လုံး ဘားမှမသိပဲနဲ့ ဖြေရှင်းခိုင်းထားတယ်။ ကျောင်းသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြီး ထင်မြင်ချက်တွေကို အတန်းလိုက် ထက်ပြီး ဆွေးနွေးရပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ Ideas တွေကို သိရှိရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်မှားတာ၊ ကိုယ်မရှင်းတာကို အပြိုင်အဆိုင် debate လုပ်သလို့မျိုး နားလည်ထိတိုင်အောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆရာက ဆွေးနွေးတာကို နားထောင်နေပြီး လိုအပ်ရင် ဝင်ပြီးဆွေးနွေးပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ဘားမှပြောစရာမရှိရင်လည်း ရှိလာအောင် topic တွေချပေးပါတယ်။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးတာကို အဓိကထားပြီး ဘားမှမဆွေးနွေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုတော့ ဆရာက မေးခွန်းလေးတွေ ပေးပြီး ဖြေခိုင်းပါတယ်။
ကျောင်းမှာတော့ အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ စာသင်ရပါတယ်။ meeting ၃ခုရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ ပြဿနာကို analysis လုပ်ပြီး ဘားတွေသိလဲ၊ ဘာတွေမသိဘူးလဲ၊ မသိတဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုရှာရမှာလဲ စတဲ့ Brainstorming လုပ်ခိုင်းတာပါ။
ပေးထားတဲ့ ပြဿနာမှာ ကိုယ်သိတဲ့ အရာတွေချရေးပေါ့။ ကိုယ်နားလည်တဲ့ အရာတွေကို ရေးနိုင်သလောက် ရေးချလို့ရပါတယ်။ Topic နဲ့တော့ ကိုက်ရပါမယ်။
ဒါကတော့ နားမလည်တာတွေကို ချရေးတာပါ။ ကိုရေးတဲ့ အရာတွေက ရှာလို့ရနိုင်မဲ့အရာတွေ၊ လက်တွေ့ဆန်ရပါမယ်။
What we need to find out?
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ခုနတုန်းက မသိတဲ့ အရာတွေကို ရှာရမယ့် အပိုင်းပါ။ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းမယ့် အပိုင်းလို့ ပြောလဲရပါတယ်။
ဒီသုံးခုကတော့ ပထမ meeting မှာလုပ်ရတာပါ။ နောက် ဒုတိယ meeting မှာတော့ အတန်းလိုက် ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့လိုက် သိတာတွေကို ဆွေနွေးရတဲ့ အပိုင်းပါ။ ကိုယ်သိတာတွေကို အများရှေ့မှာ ရှင်းပြရတာပါ။ ပြောရတာမလွယ်သလို သူများတွေ ပြန်ထောက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း သိသလောက် ဖြေပေးနိုင်ရပါမယ်။ နောက်ဆုံး meeting ကတော့ သိတာတွေ၊ ရှိတာတွေကို ထုပ်ပြရတဲ့ အပိုင်းပါ။ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သလို့ ဒီနေ့တစ်နေ့တာ လုပ်ခဲ့တာတွေရဲ့ ရလာဒ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့မှာ presentation လုပ်ရပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၁၀မိနှစ်လောက်လုပ်ရပါတယ်။ limited အချိန်ဖြစ်လို့ ပြောချင်တာတွေကို မကျန်ခဲ့အောင် သေသေချာချာ ပြောရပါတယ်။ အားလုံးပြီ:သွားပြီဆိုရင် Q &A ပါ။ ဆရာက မရှင်းတာတွေကို ပြန်မေးပါတယ်။ ပိုသိချင်ရင်လဲ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပြောနိုင်ရပါတယ်။ အပြောနိုင်ရင် အမှတ်လျော့ပါတယ်။
အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပုံမှန် PBL မှာသုံးတဲ့ အရာတွေပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ ညမှာ တစ်နေ့တာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြီး reflect journal လုပ်ရပါတယ်။ အဲ့လို လုပ်ချင်းအားဖြစ် ကျောင်းသားတွေဟာ ကိုယ်ဘားတွေ သင်ပြီ:ခဲ့လဲ၊ ဘာတွေရလိုက်လဲ၊ ဘာတွေနာမလည်းဘူးလဲ၊ စတဲ့ self-reflection ကိုလုပ်ပေးပါတယ်။ တခါတလေကျတော့ ဆရာက မေးခွန်းတွေ ဖြေခိုင်းပါတယ်။ ကျောင်းသားကလည်း မသိတာကို မေးခွင့် ရှိသလို့ ဆရာကလည်း ပြန်ဖြေကြားပေးရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ peer evaluation ပါ။ အဖွဲလိုက် လိုပ်ရတဲ့ system ဆိုတော့ evaluation က မပါမဖြစ်ပါ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Quiz ပါ။ Home work လိုပါပဲ။စာတွေကို မမေ့အောင် နည်းမျိုးဆုံနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းသွားပြီး ပေးတဲ့ စာတွေ သေသေချာချာလိုက် လုပ်ရင် စာတော်တော်များများ မကျက်ဘဲ စာမေးပွဲ ဖြေလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာတွေအားလုံးဟာ ကိုယ်ကိုတိုင် ဖြေရှင်းထားတဲ့ solution တွေပဲလေ။ နားလည်မှ ပြန်ပြောတတ်သလို နားလည်မှ အားလုံးကို လုပ်နိုင်မယ်။ ကျောင်းသားတွေကို ဘယ်လောက် နားလည်သလဲလို့ သိအောင်စစ်တာကတော့ စာမေးပွဲပါ။
စာမေးပွဲကို exam လို့ မပြောဘဲ Understanding Test(UT) လို့ခေါ်တာ PBL မှာပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ UT တွေက Open Book တွေပါ။ Book တင်မက Laptop ပါ ပေးသုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Internet တော့ မရဘူး။ အချင်းချင်း စကားပြောလို့မရဘူး။ ကျောင်းမှာကတော့ Book မသုံးဘူး Laptop နဲ့ပဲ အားလုံးလုပ်သွားတယ်။ စာသင်တာ၊ စာလုပ်တာ၊ စာမေးပွဲဖြေတာ အားလုံး Computer နဲ့လုပ်ရတယ်။ PBLဆို computer နဲ့ပဲလုပ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Paper နဲ့လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ UT မှာလည်း မေးတာက Multiple Choice တွေများပါတယ်။ short essay တွေလည်းပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ Time Limitation ပါ။ အချိန်ကို ကွက်တိပဲပေးထားတယ်။ 1 mark ကို 1 minute ပဲရတယ်။ ကြည့်ဖြေလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် စာအုပ်ထဲက ကူးချရင် သုည ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဟာကို ပြန်ပြီး နားလည်သလို့ ရေးမယ်လို့ ပြောတာပါ။
အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် PBL က ကောင်းတဲ့ system ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ Up -to-date ဖြစ်တဲ့ စာသင်စနစ်ဖြစ်သလို ကျောင်းသားတွေကို အရည်အချင်းပြည့်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Independence worker တွေဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်လိုက်တာပါ။ ကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်ရှင်း၊ သူများကို အားမကိုးတတ်အောင် ကျောင်းမှာ လုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ နောက်တစ်ခုက လူပေါင်းတတ်အောင်လဲ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အများနဲ့ ဆွေးနွေးရတယ်၊ အဖွဲလိုက် လုပ်ရတယ်။ အဖွဲဆိုတာကလဲ အမြဲပြောင်းနေတယ်။ ဒီနေ့ဒီလူနဲ့တူရင် နောက်နေ့ပြန်တူဖို့ဆိုတာ ရှားတယ်။ ပြီးတော့ Semester ပြီးသွားရင် အတန်းပြောင်းသွားသလို အတန်းဖော်တွေပါ ပြောင်းသွားတာက ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေကို လူဝင်ဆန့်အောင်၊ လူပေါင်းတတ်အောင် လုပ်ပေးသလို ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ PBL ရဲ့ အားသာချက်တွေလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။